Taiwan: Inona No Azon’ny Baseball Atao ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2018 2:55 GMT
Ireto Taiwane sasany ireto dia milalao ao amin'ny Major League Baseball : i Chin-Feng Chen ao amin'ny Dodgers nanomboka tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2005, i Chin-Lung Hu ao amin'ny Dodgers, i Hong-Chih Kuo ao amin'ny Dodgers, i Chin-Hui Tsao ao amin'ny Royals ary i Chien-Ming Wang ao amin'ny Yankees. Na dia tian'ny taiwane aza ry zareo ireo, dia tsy ireo kintan'ny baseball ireo no banjinin'ity lahatsoratra ity. Indreto misy tantara miresaka ny fomba nanovàn'ny baseball ny fiainan'ireo olona manana fahasembanana sy ireo mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany any amin'ny tany lavitra.
Sary natolotry ny Haomei.
Manomboka ny tantara voalohany rehefa nametraka hafatra tao amin'ny bilaogin'i Haomei momba ny Sacred Heart Home (Tranon'ny Fo Masina ) natao ho an'ny olona manana fahasembanana ilay mpanoratra tantara an-tsehatra, mpilalao sady tale, Nien-Jen Wu. Ny Fr. Franz Burkhardt no nanangana ny Tranon'ny Fo Masina any Chia-Yi, Taiwan, tamin'ny 1980, ary nihevitra ny hanangana trano lehibe malalaka izy mba hanampiana kokoa ireo olona manana fahasembanana. Na efa maty tamin'ny 2002 aza ny Reverend Franz Burkhard, ilay nahazo ny fankasitrahana tamin'ny filoham-pirenena sy ny Papa noho ny asany tany Taiwan efa ho antsasaka taonjato iray, dia notohizan'ireo mpiara-miasa aminy ny tetikasany. Noho ny tsy fahampian'ny ho enti-manana, dia natombok'i Haomei ny fitorahana bilaogy momba ny Trano'ny Fo Masina sy nitady fanampiana ara-bola ary nanasa ny olona hitsidika ny Tranon'ny Fo Masina.
Ampahany iray amin'ireny hetsika fanangonam-bola ireny ny resaka baseball.
Tantarain'i Chensumi ny fomba nanaovan'i Tai-Yuan Kuo sonia ilay baolin'ny baseball hatao lavanty hitadiavana vola :
Nolazaiko tamin'i Tai-Yuan Kuo ny fitadiavana vola ho an'ny Tranon'ny Fo Masina. Nihaino tsara izy ary nanaiky ny hanao sonia baolina baseball vitsivitsy tsy amim-pisalasalàna.[…] Nanontany azy aho, ” Mbola afaka manao sonia ve ianao ?” “Eny, Rehefa hanaovana zavatra tsara, tsy misy mihitsy ny tsia !” hoy ny navaliny.
Nahazoan'ny Tranon'ny Fo Masina 182.100 NTD io lavanty io, ary io fahombiazana io no nanainga ireo mpitia baseball sasany hitondra ny fahatsiarovany ny baseball tamin'ny lavanty faharoa. Nahazoana 281.861 NTD ho an'ny Tranon'ny Fo Masina ilay lavanty faharoa.Tsy fahafahampo ho an'ny Tranon'ny Fo Masina fotsiny ny vokatra azo fa ho an'ireo mpitia baseball ihany koa .
Taloha, rehefa miresaka ny fifandraisan'ny baseball sy ny vola izahay, dia nieritreritra loka. Na izany aza, tamin'ity indray mitoraka ity, rehefa niaraka niasa tamin'ny vola ny baseball, dia nahatanteraka zavatra tena nampihetsi-po izahay.
Ny tantara faharoa dia momba ny fanampiana ny ekipan'ny baseball sasany any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany any amin'ny tany lavitra andriana. Notaterin'i Chensumi :
Nahangona 72.000 NTD ny vondron'ny tetikasa Chien-Kuo.[…] Hiangavy ny coach Wen-Cheng Lan isika mba hanampy antsika hifidy ireo ekipanà baseball sasany izay mila ny fanampiantsika bebe kokoa. Aorian'ity lalao baseball ity dia handefa fitaovana isika ho fanomezana mahafinaritra ho an'ireo tanora mpilalao izay manohy ny baseball nofinofiny any amin'ireo sekoly ambaratonga voalohany. Isaoranay ihany koa ny namanay Yen-Hsi Lin sy ny fanampian'i Jung-Chien Yang mba hahafahanay mahafantatra bebe kokoa ny vokatra ara-dalànan'ireo fitaovana ireo. Azo anampiana ekipanà baseball maherin'ny telo any amin'ireo sekoly fanabeazana fototra any an-tany lavitra ny vola voaangonay.
Mifototra amin'ny fitiavana ny ankizy sy ny baseball ny fandaharanasan'ny vondrona Chien-Kuo
Azonay ampiana ireo ankizy, izay miditra ao amin'ny sahan'ny MLB na milalao amin'ny ekipam-pirenen'ny baseball na ny ho matihanina rahampitso, hanana fiarovan-tànana vaovao ary tsy hanahy ny resaka fahaverezan'ny fampiharana ny baseball. Amin'izay fotoana izay, dia ho fantantr'izy ireo fa tsy irery izy ireo. Heverinay fa raha mahazo fanampiana aty am-piandohan'ny asany ry zareo, dia ho feno fankaitrahana noho ny fahafahan-dry zareo rehefa milalao baseball izy ireo.
Notantarain'i Redyellow izay hitan-dry zareo rehefa nandefa ireo fitaovana tany amin'ny iray amin'ireo sekoly ambaratonga voalohany ry zareo :
這一天我回來後，心底帶著暖暖的滿足。意外變成先發登板的我，帶著大家的愛心來到汐止國小，看著天真活潑的小球員，心裏彷彿被純淨的水流洗淨一般。到底是我 幫助了他們，還是他們幫助了我，讓我找回心中久違的感動。[…]替這些勇敢追夢的孩子們吶 喊加油吧！因為這也是為我們自己加油啊！
Nody tamin-kafaliana tanteraka aho androany. Lasa izaho no olona voalohany nandefa tsinahy ny fitiavanantsika ho any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany lavitra, Hsi-Chih. Rehefa nahita ireo tanora mpilalao maha-te ho tia mavitrika aho, dia toy ny hoe voasasa tamin'ny rano madio ny foko. Angamba toy ny hoe manampy azy ireo aho. Na izany aza, manampy ahy hahatsapa ny fihetsehampo izay efa tsy veriko hatry ny ela ry zareo. […] ‘Ndao hobiana ireo ankizy be herimpo ireo rehefa manohy ny nofinofiny ! Rehefa manao izany isika dia mihoby ny tenantsika ! Tsapako ihany nony farany fa mpankafy baseball aho, saingy tsy mpanakafy baseball aho androany.